R/Wasaare Khayre oo xarigga ka jaray Xafiisyo lagu qabto Cabashooyinka dadweynaha.
Xafiiskani oo loogu talagalay in in lagu qabto Cabashooyinka bulshada Soomaaliyeed ee laxiriira dhinacyada Cadaaladda iyo talo bixinta ayaa waxaa magaalaad Muqdisho ka hirgelisay Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaA si rasmi ah xarigga uga jaray xaruntaasi,iyadoo ay goob joog ka ahaayeen Wasiiro katirsan Xukuumadda oo uu kamid ahaa Wasiirka Cadaaladda.
Xafiisyadan ayaa waxaa ka howlgalidoona sharciyaqaano, kuwaasi oo si mutadawacnimo ah bulshada ugu sameyndoona latalin dhinacyada sharciga iyo Cadaaladda, iydoo uu halkaasi imaandono muwadinkasta oo Soomaaliyeed oo qaba tabashooyin.
“Waxaad uga mahadcelinayaa Wasaaradda Cadaaladda oo hirgelisay Xafiisyadan,tani waxay qeyb ka tahay qorshaha horumarinat Cadaaladda,waxayna Xukuumaddu ay xoogga saaridoontaa sidii horumarin loogu sameyn lahaa arriamaha Cadaaladda iyo garsoorka oo muhiim u ah Dalka”, Ayuu yiri R’iisul Wasaare Khayre.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhanka kale waxaa uu guddoomay ilaa 18 sharciyo oo ay ku wareejisay Wasaaradda Cadaaladda,si loo hor geeyo Golaha Wasiirada,waxaana sharciyadaasi soo diyaariyay qaar kamid ah Wasaaradda Cadaadda Dalka.(Hol)